Ufuna ukuphila isikhathi eside? Thatha iholide lemvelo
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » Ufuna ukuphila isikhathi eside? Thatha iholide lemvelo
AmaSntists abike muva nje ukuthi kunokuxhumana okuqondile phakathi kwamaholide emvelo nempilo ende.
Ngobufakazi obuningi obusekelwe ocwaningweni lwezinzuzo zezempilo ezilethwa ukuphumula okufanele nesikhathi esichithwa kwimvelo, amaholide asemoyeni omusha abonakala ekhanga kakhulu kunakuqala.
Abafunayo bezempilo abebevakashele indawo yokubhukha yomlando waseLithuania eDruskininkai iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili abadingi bufakazi balokho ososayensi abasitshele khona muva nje - kukhona ukuxhumana okuqondile phakathi kwamaholide emvelweni nempilo ende.
Ucwaningo lweHelsinki Businessmen olwenziwe muva nje olwalandela abaphathi besilisa abayi-1,222 abavela eFinland isikhathi esingaphezu kwamashumi amane eminyaka, lwathola ukuthi labo ababambe iqhaza abathuthukisa indlela yabo yokuphila beqeda isici esisodwa noma eziningi kodwa bathathe amaholide ahlala isikhathi esingaphansi kwamasonto amathathu baveza ukuthi bane-37 amaphesenti aphezulu amathuba okufa aphakathi kweminyaka yobudala engama-50 nengama-80 kunalawo ayejwayele ukuthatha amaholide amade amasonto amathathu noma ngisho namade.
Isayensi futhi ithi iholide lisebenza kakhulu kwezempilo yonke uma lichithwa emvelweni. Isibonelo, odokotela baseScotland banikeza ngokoqobo iziguli zabo imvelo ukuze zenze ngcono umfutho wegazi lazo, zinciphise amathuba okuba nesifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi, noma zithuthukise impilo yazo yonke yengqondo. “Imithi kadokotela” iqukethe imininingwane yokuthi ukuphuma ngaphandle kungasiza kanjani ohlelweni lokwelashwa jikelele - kanye nemibono yokuthi wenzeni ngesikhathi sokwelashwa komoya okusha.
Kudala ngaphambi kokuthi izinzuzo zamakhefu amade nokwelashwa kwemvelo kuthole ubufakazi obunzulu besayensi nokunakwa okufanele kubasebenzi bezempilo, izindawo eziningi zokungcebeleka zaseYurophu sezijwayele ukuhlanganisa izimo ezifanele zezivakashi zazo zokuchitha amaholide amade zisondele ngqo emvelweni.
Isibonelo esihle salokho kungaba idolobha le-SPA iDruskininkai, eliseningizimu yeLithuania. Kusukela ngekhulu le-18, iDruskininkai idume umhlaba wonke ngemithombo yayo yamanzi amaminerali, udaka olaphayo, namahlathi ezihlahla zikaphayini. Namuhla, iDruskininkai yidolobha elikhulu kunawo wonke le-SPA eLithuania elinikezela ngezigemegeme zonyaka wonke zangaphandle kanye nokuhlangenwe nakho kwe-SPA, ukuvuselelwa nokwelashwa.
Imvamisa ebizwa ngokuthi "amaphaphu eLithuania," indawo yokuvakasha yaseDruskininkai iyakwazi ukudala ulwazi olunothile kunoma yimuphi umthandi wemvelo - noma lowo osanda kuthola "incwadi kadokotela" - ukuthi amasonto amathathu eholide abengeke anele thokozela zonke izimangaliso ezizungezile zedolobha. Izivakashi zingahamba ngebhayisikili emahlathini ezihlahla zikaphayini, zihambahamba echibini elisenkabeni, noma ulayini we-zip udlula emfuleni iNemunas epaki ye-UNO adventure esehlathini. EPaki yezempilo yaseDineika, izivakashi zingakujabulela ukwelashwa komoya okunomoya, ama-sunbeds, nokugeza emithonjeni yemvelo.
Hhayi ama-SPA amaningi kuphela ahlinzeka ngezinqubo ezahlukahlukene zokuphulukisa eDruskininkai; kunamathuba amaningi kakhulu amaholide angasoze alibaleka alinde abathandi bezokungcebeleka lapha. Indawo yokungcebeleka inepaki enkulu i-Aqua esifundeni, izindlela ezahlukahlukene zokuhamba izintaba namabhayisikili, enye yezintaba ezinkulu ezishushuluza zasendlini eYurophu - ezifinyeleleka unyaka wonke - namabhishi asendle ohlangothini lwachibi oluzungezwe amahlathi kaphayini.
Europe Finland Helsinki Lithuania Scotland
ITanzania ihlose imakethe yezokuvakasha yaseChina
Ukuqapha okwengeziwe ngenxa yobuphekula: Izinkinga zase-US zeluleka ngeTunisia
I-Bahamas Airports Airports Uhlelo lwe-PPP Lokukhipha Isicelo Se...
Akukho ukuhlolwa kwe-COVID kwabahambi abagonyiwe abaya eTanzania
Lena akuyona iNdlela yaseMelika
Amabhizinisi nezindawo eziya kuzo zinxuswa ukuthi zingenele i-WTM...